Shan Qof Oo Ka Badbaaday Dab Iyo Gurigoodi Oo Shuf-Beelay – somalilandtoday.com
Shan Qof Oo Ka Badbaaday Dab Iyo Gurigoodi Oo Shuf-Beelay
(SLT-Hargeysa)-Guri jiingad ah oo ka koobnaa afar qol oo ku yaalla gudaha magaalada Hargeysa, gaar ahaan xaafadda Hindiya Line-ka ayaa habeen hore 12: 30-kii uu dab qabsadday, kadib markii uu shoodh ka dhashay korontaddii guriga.
Hantidii ugu weyneyd ee reerkani lahaa oo aheyd tukaan ay kala soo bixi jireen quutal daruurigooda iyo hoygii ay gali jireen ayay ku waayeen dabkan qabsadday gurigani.
Hase ahaate ma jirto cid wax ku noqotay amase ku naf wayday dabkan khasaaraha ka geystay goobtani.
Ciidamadda dabdamiska ayaa gacan weyn ka geystay bakhtiinta dabkani si aanu ugu gudbin guryaha kale ee la jaarka ahaa.
Fu’aad Ibraahim Yuusuf oo ka mid ah qoyskan hantidoodii ku waayay isaga iyo shan qof oo kalena ay nasiib u heleen in ay ka badbaadaan dabka gurigani baabi’iyay ayaa wargeyska Dawan oo goobta ku booqday uga waramay sidii ay wax u dhaceen waxaanu yidhi “Guriga shoodh baa qabsaday in uu gubtana taasi ayaa sabab u aheyd, aniguna waxaan hurday maqsin ku xigay tukaankan aan imika dhex joogno ee aan waxba laga bakhtiin, waxaan dareemay kuleylkii faraha badnaa ee dabka, markii aanu soo baxnay gurigii oo ololaya, markiiba waxaanu isku daynay in aanu la hadalo ciidanka dabdamiska laakiin telefoonkooda oo aanu hore u weynay ayaa keentay in guriga iyo meheradahayaguba ay basbeelaan, gurigan kale ee ku xiga isaga oo markaasi dabku gaadhay ayay noo yimaadeen oo ay bakhtiiyeen”
“Guriga shan qof ayaa hurday aniguna qolkan tukaanka ku xiga ayaan hurday, kuleylkii dabka ayaan ku kacay oo aan anigu ku baraarugay” ayuu yidhi Fu’aad Ibraahim Yuusuf oo ka mid ah shan qof oo ka badbaaday dabkan.
Xasan Ciise Cabdi oo isna ka mid ah gaadhka xaafadda ilaaliya oo aannu goobta kula kulanay ayaa yidhi “Anigu waxaan ahey gaadhka xaafadda waxaan la kulmey meeshan oo markaasi la bakhtiiyay inta uu dab qabsaday iyo reerkii oo meesha lagaga raray, markaa shirkadaha leydhka waxaan leeyahay waar leydhka dadka ka hagaajiya oo dayactira, oo si hagar la’aana dadka ugu adeega mar walbana hubiya.”